Wednesday 28th October 2020 12:36:08 in Wararkii Maanta by Madaxa Wararka
Hargeysa (KARIN NEWS) – Dalka Imaaraadka Carabta ayaa shalay soo saaray shuruudo kala duwan oo uu ku soo rogay dadka booqashada iyo shaqooyinka u tagaya dalkaas ee ka imanaya dalalka dunida iyo weliba kuwa u gudbaya dalal kale ee Imaaraadka Carabta sii maraya.
Dalalka ay Somaliland ku jirto waxa ay Imaaraadku sheegeen in dadkadeggen Imaaraadka ee ka imanaya dalalka ay Somaliland ka mid tahay ay waajib tahay inay sitaan laba caddaymood oo muujinaya natiijada baadhista Covid-19. Mid waa inay soo qaataan ka hor intaanay soo dhoofin oo ah 96 saacadood ka hor in la soo baadhay, iyo ka labaad oo ah inay ku maraan baadhis kale marka ay soo gaadhaan Dubai.
Dadka dalxiisayaasha ah ee tagaya UAE ee ka tagaya dalalka ay Somaliland ku jirto waa inay iyaguna inay sitaan labacadaymood oo muujinaya natiijada baadhista Covid-19. Mid waa inay soo qaataan ka hor intaanay soo bixin oo ah 96 saacadood ka hor in la soo baadhay iyo ka labaad oo ah inay ku maraan baadhis kale marka ay soo gaadhaan Dubai.
Dadka ka gudbaya Imaaraadka ee ku sii jeeda dalal kale waa inay haystaan warqad muujinaysa ama ay ku caddahay in laga waayayCovid_19.